लागुऔषध प्रयोग तथा दुव्र्यसनविरुद्ध अन्तरक्रिया
न्यूज सञ्जाल ३२ जेष्ठ २०७६, शनिबार १४:४१
काँकरभिट्टा । बालजागरण मन्च नेपालको आयोजना र नवयात्रा पुनर्स्थापना केन्द्र कांकरभिट्टाको सहकार्यमा २ दिने “लागुऔषध प्रयोग तथा दुर्व्यसनविरुद्ध अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । मेचीनगर नगरपालिका वार्ड न ५ को बालकल्याण माविका बिध्यार्थीहरूलाई र मेचीनगर ५ कै नकलबन्दा चिया बगानका मजदुरहरूलाई ...
बालबालिकालाई सही सल्लाह आवश्यक हुन्छ !
न्यूज सञ्जाल ३२ जेष्ठ २०७६, शनिबार ११:४१
चाँदनी कर्माचार्य हिजोआज किशोरावस्थाका बालबालिकाहरूमा अनावश्यक वादविवाद गर्ने, झगडा गर्ने, भनेको कुरा नमान्ने, आमाबुसँग कडा स्वरमा झर्केर बोल्ने लगायतका प्रवृत्ति देखिन्छ । अचेलका बालबालिका न आफ्ना आमाबाबुले भनेका कुराहरू मान्न तयार हुन्छन् न कुनै जिम्मेवारी वहन गर्न चाहन्छन् । आमाबाबुहरू ...
बाह्रदशीका बुहारीलाई कम्प्युटर तालिम
न्यूज सञ्जाल ३१ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १७:३३
डाँगीबारी । प्राविधिक ज्ञान लिन इच्छुक तर समय र अवसर नपाएका बाह्रदशी गाउँपालिकाको ७ नम्बर वडाका बुहारीहरुलाई कम्प्युटर तालिम प्रदान गरिएको छ । गाउँपालिकाको महिला लक्षित कार्यक्रमबाट ७ नम्बर वडाका २० जना बुहारी (महिला)लाई तालिम प्रदान गरिएको हो । वडास्तरीय ...
गर्मीले अर्जुनधाराका विद्यालय बन्द
न्यूज सञ्जाल ३१ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ११:४३
झापा । अत्यधिक गर्मी बढेका कारण झापाको अर्जुनधारामा सञ्चालित निजी विद्यालयले शुक्रबार विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका छन् । गर्मीले बालबालिकाको अध्ययनमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै शुक्रबारको लागि बिदा दिएको हो । मौसममा सुधार हुने सङ्केत देखापरेपछि विद्यालय सञ्चालन हुने प्याब्सनका ...
न्यूज सञ्जाल २७ जेष्ठ २०७६, सोमबार १६:०८
काठमाडौं । सन् २०१९ को कोरियाली भाषा परीक्षामा ८४ हजार २१५ परीक्षार्थी सहभागी भएका छन्। काठमाडौँ, ललितपुर र पोखरामा शनिबार र आइतबार एकैसाथ सञ्चालन भएको परीक्षामा आठ हजार १४१ परीक्षार्थी अनुपस्थित भएको इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ। शनिबारको भाषा परीक्षार्थी ...
इलामका विद्यालयको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा
न्यूज सञ्जाल २२ जेष्ठ २०७६, बुधबार १४:२१
इलाम । इलामका कतिपय सामुदायिक विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । जग्गाको उचित संरक्षणमा सरोकारवाला निकायको बेवास्ता र भूमाफियाको चलखेलले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको हो । सदरमुकामस्थित आदर्श मावि, गोलाखर्कस्थित भगवती मावि, सूर्योदय नगरपालिकाको करफोक मावि, ...
उपत्यकासहित देशभरको पहाडी क्षेत्रमा केही दिनदेखि नियमितजसो वर्षा भैरहेको छ । बिहान आकाशमा डम्म बादल लाग्ने, बेला बेलामा घाम लाग्ने र दिउँसोपछि अपरान्हतिर असिनासहित पानी आउने गर्छ । कहिलेकाहीँ एकै ठाउँमा एकदमै ठूलो पानी पर्छ । अहिले प्रिमनसुन ९मनसुन सुरु ...
सइ कालिदासको पहलमा ट्राफिक डमी राँखिँदै
न्यूज सञ्जाल २० जेष्ठ २०७६, सोमबार २१:५७
झापा । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापा भन्नेबित्तिकै सबैले सोध्ने नाम हो ? ट्राफिक प्रहरी नायव निरीक्षक कालिदास रेग्मी । लामो समयदेखि ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापामा सक्रिय रुपमा रहेका प्रहरी नायब निरीक्षक कालिदास रेग्मी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम ...
झापाका पत्रकार सिग्देल अब सर्जक !
न्यूज सञ्जाल २० जेष्ठ २०७६, सोमबार १९:५५
बिर्तामोड । पत्रकार तीर्थ सिग्देल आजबाट औपचारिकरुपमा सर्जक बनेका छन् । छिटपुटरुपमा साहित्य साधना गरिरहेको बताउने सिग्देलले ‘मनोनेट’ नामक कथासंग्रह सार्वजनिक गरेर आजबाट आफूलाई साहित्य सर्जकका रुपमा उभ्याएका हुन् । 'मनोनेट' कथासंग्रहको साहित्यकार भवानी क्षेत्रीले विमोचन गरिदिएकी हुन् । कथा ...
मोरङमा लिम्बू भाषामा पठनपाठन
न्यूज सञ्जाल २० जेष्ठ २०७६, सोमबार १०:३७
पथरी । चन्द्रकिरातेश्वर माध्यमिक विद्यालय पथरी शनिश्चरे–७, मोरङमा लिम्बु भाषामा कक्षा ६ को पठनपाठन सुरु भएको छ । लिम्बु विद्यार्थीहरुको साझा संस्था लिम्बु विद्यार्थी मञ्च (लिवि मञ्च)को पहलमा मातृभाषामा पठनपाठन सुरु भएको हो । आइतबार नगर प्रमुख दिलिपकुमार राईले लिम्बु ...